Global Voices teny Malagasy » Sina: izaho no i Liu Xianbin · Global Voices teny Malagasy » Print
Sina: izaho no i Liu Xianbin
Voadika ny 18 Aogositra 2010 5:55 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Zon'olombelona
Voalohany, iza moa i Liu Xianbin  （劉賢斌）? 42 taona i Liu ary nandany ny iray ampahatelon'ny androm-piainany tany am-ponja izy. Nogadraina indray izy amin'izao fotoana izao. Ity ambany ity ny sariny ao amin'ny mombamomba azy :
Ka inona ary no nataony ? Tamin'ny taona 1989, tamin'izy 20 taona, mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo izy ary nandray anjara tamin'ny hetsika demokratika tany Beijing kianja Tiananmen nitaky ny fanavaozana politika miady amin'ny kolikoly. Na izany aza, tsy nanakana an'i Liu amin'ny zoto ara-politika nataony ny famoretan'ny miaramila ary nogadraina izy tamin'ny 15 Aprily 1991, voasazy nandritra ny 2 taona sy tapany noho ny heloka ” fanapariahana fampielezan-kevitra manohitra ny revolisiona “. Navotsotra tamin'ny volana Oktobra 1993 izy , ary mbola manohy mikarakara antoko politika demokratika ihany , ary dia voasazy higadra 13 taona indray izy noho ny heloka “fikomiana amin'ny fanjakana “. Noafahana tamin'ny Novambra 2008 izy tamin'ny farany.
Naharitra 20 volana fotsiny ny fahafahan'i Liu . Tamin'ny 28 Jona 2010, nogadrain'ny polisy Sichuan izy noho ireo asasorany ara-politika. Tamin'ny 12 Aogositra, natolotra ny fitsarana izy noho ny heloka ” fampirisihana fikomiana amin'ny fanjakana ” .
Mba hanehoana ny fanohanana an'i Liu, nanomboka nanao fanentanana an-tserasera ireo mpitolona eo an-toerana sy any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny hiaka hoe “ izaho no Liu Xianbin ” tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay. Taty aoriana, vondrona 16 momba izany no natsangana , toy ny vondrona Hong Kong , vondrona Shandong , vondrona Anhui  , vondrona Inner Mongolia  , vondrona Guangxi , vondrona Shaanxi , ary sns .
Manazava ny antony nahatonga azy ny ho sahy hiteny hoan'i Liu Xianbin i Liu Feiyao, mpitolona ho amin'ny fiovana ara-tsosialy avy any Hubei
民间反响如此之大，除了因刘贤斌对民主、人权长期的不懈地追求外，除了他为了自己的理想受尽磨难以外，还有一个原因就是当局这次做得太过了。大家实在难以 理解和接受，刘贤斌这次出狱只有一年多的时间，除了声援被抓的朋友等不多的行动外，他又能有多少“颠覆国家政权”的行为呢？更何况声援一下被抓的朋友也是 “颠覆“吗？
Ankoatra ny fanajanay ny fitoloman'i Liu Xianbin ho amin'ny demokrasia, ny zon'olombelona ary ny ny nofinofiny, dia lasa lavitra loatra ny nataon'ny governemanta tamin'ity indray mitoraka ity. Noafahana taona iray fotsiny i Liu Xianbin nefa ny zavatra nataony dia ny naneho ny fanohanany ireo mpitolona nogadrain'ny polisy. Hanao inona kosa moa izy ankoatra izany ? Ahoana no mahatonga ny fanehoana ny fanohanana ireo namana ho lasa ” fiokoam-panjakana” ?
Noraràna tamin'ny haino aman-jery fototra sy tamin'ny haino aman-jery amin'ny aterineto tsy hivoaka ireo vaovao mikasika ny tranga nahazo an'i Liu Xianbin sy ny fampielezan-keviny, ary arahimaso akaiky ireo mpikatroka avy amin'ny vondrona atahorana. Ho fanohizana ny fanentanana, nifandimby nanao fitokonana tsy hihinan-kanina ny mpikatroka ary indreto misy filazan-kevitra nosafidiana avy amin'ireo nitokona tsy hihinan-kanina ireo izay manara-dia an'i Liu Xianbin .
Iray amin'ireo naman'i Liu Xianbin izay narovany i Chen Yunfei  avy any Sichuan. Ankehitriny, anjaran'i Chen indray no manohana an'i Liu amin'ny alalan'ny fanaovana fitokonana tsy hihinan-kanina :
Nanampy ny namany hitsoaka i Xianbin nefa izy aza niafara tany am-bavan'ny tigra . Aiza ary no mety hahitantsika tany mandry fahalemana? Iza eto Shina no voaaro? Vokatry ny tsy fisian'ny ” soatovina ara-politika” eo amin'ny mpitantana sy ny foto-kevitry ny adin-tsaranga. Mba tsy hamoretana ny zanatsika noho izay noteneniny, tsy hiady mafy vao ho velona, dia tsy maintsy mitolona amin'ny fomba mazava, am-pisainana ary tsy amin-kerisetra isika mandra-piposaky ny mazava.
Xu Jianxiong  avy any Shaanxi:
刘贤斌是我们的好兄弟，是中国的好公民。今天他身陷囹圄是因为他无法放弃对正义和良知的坚持。如果我们自己的同胞可以被无端陷害、可以被因言治罪，那么， 这个国家的公正还存在吗？这个民族的希望还存在吗？我们深知，没有每一个中国公民的觉醒和行动，中国的自由和民主是永远不会到来的。绝食，只是表达我们的 一种态度－－我们永远将和正义与良知站在一起！愿刘贤斌早日获得自由，愿国家早日实现民主。
Namanay akaiky i Liu Xianbin , olona mendrika izy . Saingy raha nogadraina izy dia noho ny fandalàny ny rariny sy ny konsiansiny. Hanjakan'ny fahamarinana ve ity firenena ity raha henjehina noho ny fanehoan-kevitra ny namanay? Mbola hisy ve ny fanantenana ho an'ny vahoaka? Fantatsika rehetra fa tsy hisy mihitsy ny fahalalahana sy ny demokrasia raha tsy mihetsika ny mponina. Hanehoana fa mijoro amin'ny rariny sy ny fahafaha-mihevitra izahay no hanaovanay ity fitokonana tsy hihinankanina ity. Manantena aho fa ho afaka i Liu Xianbin ary ho tonga anie ny demokrasia .
Wei Qiang  avy any Shaanxi
izaho no Liu Xianbin , fa i Wei Qiang no anarako. Feo iray ity , tetezana mizotra mankany amin'ny maha-olombelona, hery mitondra ho amin'ny fampivoarana ara-tsosialy, fitadiavana ny fahalalahana ary fanolokoloana ny toe-panahy .
izaho no Liu Xianbin – mila miaina aho ary mila mihazakazaka! mila mamaky ny sakana izay manimba ny fiainana .
izaho no Liu Xianbin – te-hanana ny mazava aho, te-hanana fahalalahana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/18/8335/
 Liu Xianbin: http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Xianbin
 natolotra : http://taolun.info/index.php?topic=2377.0
 izaho no Liu Xianbin : http://www.initiativesforchina.org/ifc/news/Entries/2010/7/8_I_am_Liu_Xianbin.html
 vondrona Hong Kong : http://supportliuxianbinhk.blogspot.com
 Inner Mongolia: http://www.bullogger.com/blogs/wangjinbo/archives/363834.aspx
 Manazava : http://boxun.com/hero/201008/gongming/30_1.shtml
 Chen Yunfei: http://taolun.info/index.php?PHPSESSID=1ec18525ce551630036d218877a7d43f&topic=2276.msg4197#msg4197
 Xu Jianxiong: http://taolun.info/index.php?PHPSESSID=1ec18525ce551630036d218877a7d43f&topic=2276.msg4221#msg4221
 Wei Qiang: http://taolun.info/index.php?topic=2276.msg4230#msg4230